ခန်းစီးအောက်က လိုက်ကာ(၃) | PoemsCorner
ထိုအချိန် ငှက်ဆိုးတစ်ကောင်က ထိုးသွားသည်။ ရာသီက နေ တည့်တည့်အောက် ခစားဝင်လျက်ရှိသည်။ ကျေးငှက်တို့လည်း တေးမသီနိုင်။ ကျောင်းဝန်းထဲမှာတော့ အသံတွေက ညံလို့။ ကျောင်းသူတွေကတော့ အချဉ်ပေါင်းတွေကို တဝတပြဲနှင့် အပေါက်ထဲဇွတ်ထိုးနေသည်။ သီးသူကသီး။ ဖြီးသူကဖြီးလို့။ သို့ပေမယ့် ဟိုးကောင်းကင်နေကြီးက ဟီးထနေတော့
သက်ရှိတွေ ခင်မျှာ ညည်းနေရသည်။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကန်တင်းထဲ ဝင်လာတော့ အားလုံးက မျက်စောင်းများစွာ ထိုးကြသည်။ ကျွန်တော်က လွယ်အိတ်ထဲမှ စာတစ်အုပ်ကိုထုပ်၍ လိပ်ပြီး အော်လံလုပ်လိုက်သည်။ ကျော်ဇင်ကတော့ ဘုမသိဘမသိ မင်းသားဖြစ်မည်ဆို၍ ကျွန်တော့်ကို ကြောင်စီစီနှင့်ကြည့်နေသည်။ရာသီဥတု က နေ့လည်စာစားနေချိန်တွင် ကျွန်တော်က စကားတစ်ခွန်းနှင့် ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို ဖွင့်လိုက်တော့သည်။
ကျွန်တော့်နာမည်က ဝေမှိုင်းပါ။ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ဆားလို့ခေါ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ခုလို ပြောနေတာ ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး
ကျော်ဇင်ကို ငုံကြည့်လိုက်တော့ ဘုမသိဘမသိ ပြုံးပြနေသည်။ ကျွန်တော်လည်း ငါးခူပြုံးလှလှကြီး ပြန်ပြုံးပြလိုက်သည်။
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း အကြောင်းလေးကို မိတ်ဆက်ပေးမလို့ပါ… လာ သူငယ်ချင်းဒီနားထိုင်…
ကျွန်တော်က ခုံပုလေးတစ်လုံးယူပြီး ကျော်ဇင်ကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်သည်။ သူကလည်း ယောင်နန နှင့်ဝင်ထိုင်သည်။ ပြီးတော့ ဘာတွေတွေးပြီးရှက်နေမှန်းမသိ ကျွန်တော့်ကို သွားဖြဲပြသည်။
ဒါကတော့ကျွန်တော့် ချစ်လှစွာသော သူငယ်ချင်း ဖတဆိုးလေး ကျော်ဇင်ပါ…
ဟိုကောင် ခေါင်းထောင်လာသည်။ ကျွန်တော်က အသာနေဆိုပြီး မျက်ရိပ်ပြလိုက်မှ ငြိမ်ကျသွားသည်။
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းဘဝက ခါးပါတယ်ဗျာ… သူ့အဖေကသူ့အတွက်ဆိုပြီး သူငယ်စဉ်တုန်းက
လမ်းဘေးချိတ်ထားတယ့် ထမင်းထုတ်လေးသွားအဖြုတ်… ဘရိတ်ပေါက်နေတယ့် မိလာကားနဲ့အတွေ့…. ပြားပြားကိုဝပ်
သွားတာမှ … ကျွန်တော်တောင်ပြောရင်း ငိုချင်လာပြီဗျာ…
ဟိုကောင်က ကြောင်တောင်တောင် နှင့်ကျွန်တော့်ကို ကြည့်နေသည်။ ကန်တင်းထဲက သူတွေကတော့ တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စနှင့် ဝိုင်းလာကြသည်။ ကျွန်တော်ကလည်း ငိုရင်မျက်ရည်မကျမည်ဆိုး၍ သံထွေးလေးကို မျက်နှာစွတ်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ဟိုကောင်ပါ စွတ်မည်လုပ်တော့ ခေါင်းခါသည်။ လူတွေကြည့်နေတာနဲ့ပဲ သူ့ခေါင်းလေးပုတ်တာလိုလိုနဲ့ တံထွေးကို မျက်နှာစွတ်ပေးလိုက်သည်။ ဟိုကောင် က ရွံပြီး တံထွေးထွေးမယ်လုပ်တော့ သူ့ပါးစပ်ထဲ ဘေးဆိုင်က ပေါင်မုန့် တစ်လုံးသွပ်ထည့်ပေးလိုက်သည်။
သူ့အမေဆို၇င်လည်း ခုဒီလို တက္ကသိုလ်ကြီးကို သူတို့အမျိုးထဲကနေပထမဆုံး တက်နိုင်တယ့်သားလေးတွက် ဂုဏ်ယူလို့ဆိုပြီး လှန်းထားတယ့် ပုဆိုးလိုက်ခိုးရင်း … ဝိုင်းအရိုက်ခံရလို့ ဆေးရုံရောက်နေလေရဲ့ဗျာ…
ကျော်ဇင်က ခုမှ သူ့ကို အထဲ ဇွတ်ထည့်နေမှန်းသိတော့ ထရုန်းသည်။ ဘယ်ရမလဲ သူ့ကို သနားလို့ ပုခုံးဖက်တာလိုလိုနှင့် လက်နှင့် ဖိထားလိုက်သည်။ ပြီးတော့ သူ့နားနားကပ်၍ နှစ်သောင်းနော်လို့ ကပ်ပြောလိုက်တော့ သကောင့် သားမျက်ရည်ဝိုင်းလို့ ပြန်ငြိမ်သွားသည်။
အဲဒါခု သူ့ခမျှာ ကျောင်းတော်ကြီးကို ခြေချမယ်ဆိုပြီး ဘတ်စ်ကားခိုးစီးပြီး ကျောင်းတက်တက်နေတာ ကျောင်းလခကလည်းမပေးရသေးဘူးလေ… ပြီးတော့ သူ့အမေ… သူ့အမေ… ဟီးသူငယ်ချင်းရဲ့ မင်းအဖြစ်ဆိုးလှချည်လား…..
နည်းနည်းလောက်ပိုပိုလျံလျံလေးအော်ငိုပြလိုက်သည်။ ပြီးတော့ သူ့မျက်နှာကို သနားလို့ ပွတ်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဆွဲလိမ်ပြစ်လိုက်သည်… လက်လွန်သွားသည်ထင် … ချက်ချင်းပင်နီဲရဲပြီး ယောင်ကိုင်းတက်လာသည်။
ကြည့်ပါဦးဗျာ သူ့ခင်မျှာ မစားဘူးတယ့်ပေါင်မုန့်ကိုတောင်မစားနိုင်တော့ဘူး ရှက်လို့ လားမသိဘူး မျက်နှာကို
ဘယ်လိုလို့စားနိုင်မှာလဲ အပြည့်သိပ်ထည့်ထားတာ ဝါးဖို့မပြောနဲ့ ဟလို့တောင်မရဘူး… နည်းနည်းလေးလှုပ်မယ် ကြံလိုက်ရင် လက်နဲ့ရော ခန္ဒာကိုယ်နဲ့ဖိထားတာ… အားတောင်သိပ်သုံးစရာမလိုလိုက်ဘူး… ဒီကောင်က လူ့ဖလံလေးလေ။
သူ့ခမျာ ပညာရေးကို ဦးစားပေးပြီး တက်ချင်တယ့် ဆန္ဒ တွေနဲ့ ကြိုးစားပြီးတောင်းစားနေရလို့ ခုလို… ခုလို
ကောင်မလေးတချို့က ကျော်ဇင်ကြည့်ပြီးမျက်ရည်ဝဲသွားသည်။ တချို့ကတော့ နှာခေါင်းရှုံကြသည်။ ဟိုကောင်က တော့ လှုပ်လည်းလှုပ်မရလို့ ပြောလည်းပြောမရနှင့် မျက်နှာက ရှုံမဲ့နေသည်။ အဲဒါကိုပဲ ကောင်မလေးတွေတချို့ထဲ့ သနားတတ်တယ့် သူကတော့ ကြံဖန်သနားနေသည်။
စေတနာ သဒ္ဒါတရားထက်သန်တယ့် မြန်မာ တွေမှန်ရင်တော့ ဒီလိုဖြစ်နေတယ့်သူကို တတ်အားသလောက်ကူညီကြမယ်လို့
ကျွန်တော်လွယ်အိတ်ကလေးကို ချွတ်၍ သူ့ရှေ့ချထားလိုက်သည်။ မျက်နှာငယ်လေးနှင့် ကျော်ဇင်မျက်နှာကို ကြည့်နေလိုက်သည်။ စိတ်ထဲမှာတော့ ဘယ်လောက်လောက်ရပြီလဲပေ့ါ။ ကောင်မလေးတွေများ တချို့ဆို မျက်ရည်ပါကျတယ်။ ထည့်ထည့်သွားကြတာ ထောင်တန်တွေတောင်ပါတယ်။ ဟောဟော တချို့ယောက်ကျားလေးတွေတောင် နှစ်ရာတန်တွေထုတ်လို့။
ခဏလောက်ကြာတော့ အခြေအနေကိုကြည့်၍ လွတ်အိတ်ကိုပြန်ယူပြီးလွယ်လိုက်သည်။ ဟိုကောင်က လွတ်အိတ်ကို လှမ်းယူနေသေးသည်။ မင်းကလဲရမှာပါ ဆိုပြီး ဟောက်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ အားလုံးဘက်လှည့်၍
ဒီလောက်ဆိုရင်ဖြင့်ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း လေးတွက် နှစ်လ သုံးလ စာ ဖူလုံပါပြီ ပါဝင်ကုသိုလ်ယူသူတွေကို လည်း ဆုတောင်းပေးပါတယ်…. ဆိုပြီး ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်ရွီးပေးလိုက်သည်။
ကျွန်တော့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းကို ခဏကြည့်ပေးထားကြပါ… ကျွန်တော် ခုပဲ သူ့တွက် မကြည့်ရက်နိုင်တော့လို့ စားဖူးတယ် ရှိအောင် ဒံပေါက်သွားဝယ်ပေးပါဦးမယ်… အားလုံးခဏလောက်ကြည့်ပေးပါနော်…
မျက်နှာငယ်လေးနှင့် တောင်းဆိုပြီး ကျော်ဇင် ဘက်လှည့်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ ကျော်ဇင်မင်းတော့ စားဖူးတော့မယ်ကွ ဆိုပြီး ဖက်ငိုပြလိုက်သည်။ သကောင့်သားကတော့ မတ်တပ်ထရပ်ဖို့ကြိုးစားနေသည်။ ကိုယ်ကလည်းလစ်တော့မှာဆိုတော့ ဒီကောင်ထရုန်းပြီး
လုပ်ကြပါဥိး လုပ်ကြပါဦး ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း အပျော်လွန်ပြီး တက်သွားလို့ ဝိုင်းဖိထားပေးကြပါဗျာ… လုပ်ကြပါဦး…
ယောက်ျားလေးတွေတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် တက်တက်ဖိတာ သကောင့်သား အသံကိုမထွက်ဘူး တန်းငြိမ်သွားတာ
။ ရုန်းဖို့မပြောနဲ့ အသက်ရှုလိုက်ရင်တောင် ဗိုက်ဖောင်းမခံဘူး…။
ပြီးတာနဲ့ အခြေအနေကြည့်ပြီး လူကြားထဲက မယောင်မလည်နဲ့တိုးထွက်လိုက်သည်။ ခပ်ဝေးဝေးရောက်မှ အော်ပြောပစ်လိုက်သည်။
ခုလိုကျွန်တော်ပြောတယ့် ပုံပြင်တွေကို နားထောင်ပြီး ကျွန်တော့်ကို ငွေလှူဒါန်းကြတယ့်တွက်
In: ဝတ္ထု Posted By: salt Date: May 9, 2011
Leave comment No comment & 154 views